Geeks ခရီးသွား | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | အကြံပေးချက်များ, ခရီးသွား
နှုတ်ကပတ်တရားတော် သစ်ပင်ကြီး ၎င်းသည် neologism နှင့်နေ့စဉ်နှင့်အလွတ်သဘောအသုံးပြုမှုဟူသောဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထူးဆန်းသောအရသာရှိသောသူများကိုသတ်မှတ်ရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဝါသနာတွေ၊ သူတို့ရဲ့ဗီရိုတွေ၊ စားသုံးမှုဒါမှမဟုတ်အပြုအမူတွေကိုငါသိတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ခရီးသွားလာတဲ့အခါငါတို့အရသာရှိတာ။
မှန်တယ်၊ ရင့်ကျက်မှု၊ အရာအားလုံးရှိနေပြီ Geek ခရီးသွား သတိပြုပါ
ဂျပန်သို့ Geek သွားရောက်လည်ပတ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် geek အကြောင်းသို့မဟုတ် geek အကြောင်းပြောပါကလမ်းမရှိပါ ဂျပန် နှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှု။ ဒီတိုင်းပြည်ကတကယ်ကိုအရာရာကိုပေးသည်။ သစ်သားဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောဗိသုကာကျောက်မျက်ရတနာကိုသင်အထင်ကြီးနိုင်သကဲ့သို့စက်ရုပ်ပြပွဲ၊ လိုလာစ်စတာလိုဝတ်ဆင်ထားသောစားပွဲထိုးများ၊ တောင်းခံသည့် Clone စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်လည်းသင်အထင်ကြီးနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကပ်ပါးကောင်ပြတိုက်တစ်ခု ...
စလုပ်ကြရအောင် Kabukicho စက်ရုပ်စားသောက်ဆိုင် ဒါဟာ Shinjuku, အများကြီးနှင့်အတူခရိုင်, ညဉ့်ဘဝတွေအများကြီး၌တည်ရှိ၏။ တစ်နေ့တာအတွင်းတံခါးကိုသင်လမ်းလျှောက်သွားသောအခါကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းပေါ်ရှိငွေမျက်နှာစာတစ်ခုသည်သင်၏မျက်စိကိုဖမ်းမိသည်။ ညမှာတုန်ခါတယ်။
ဒီမှာ leit လှုံ့ဆော် ဒါကစက်ရုပ်ပဲ ပြပွဲနှင့်အတူညစာ: ရင်သားကြီးသောမိန်းမများကိုစက်ရုပ် Mazinger Z မှအကောင်းဆုံးစက်ရုပ် Aphrodite စတိုင်သို့မဟုတ် Gundam စက်ရုပ်များတွင် pirouettes နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများကို ဖန်တီး၍ လှုပ်ရှားသည်။ မျက်နှာများသည်အချို့သောအလွန်စက်ရုပ်စိတ်ခံစားမှုများကိုဖော်ပြသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့်အဆုတ်ရောင်ကြောင့်ရင်သားကြီးလာသည်သို့မဟုတ်ကျုံ့သည်။ သူတို့ဟာအလွန်တရာအရောင်အသွေးစုံတဲ့ Amazons တွေဖြစ်ပြီးအသားတွေ၊ သွေးနီဥတွေ၊
အဆိုပါပြပွဲသည်သုံးနာရီကြာပြီးအလွန် kawaii ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ geek show အတွက်လက်မှတ်တွေကိုအွန်လိုင်းမှာ ၀ ယ်ပြီးသင်နာရီဝက်မတိုင်ခင်မှာပြရမယ်။ ညစာသည်သေးငယ်သောအရာ၊ မီနူးစုံတွဲတစ်တွဲ၊ ဘီယာအမြောက်အများနှင့်အခြားမည်သည့်အရာမျှမပါဘဲဤနေရာတွင်အစာစားခြင်းမဟုတ်ဘဲပြပွဲအကြောင်းဖြစ်သည်။
တိုကျိုရှိအခြား geek site တစ်ခုဖြစ်သည် Kawaii Monster ကဖေးHarajuku တွင်ဂျပန်နိုင်ငံ၏အလွန်ငယ်ရွယ်။ ခေတ်ဆန်သောရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ ကဖေးမှာ Sebastian Masuda နှင့်ပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့် Kyary Pamyu တို့၏လက်ရာဖြစ်သည် ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကလေးပြပွဲနှင့်လှည့်ကွက်အချို့ပေါင်းစပ်လိုက်သည် ဆိုးညစ် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ.
ကော်ဖီသည်ကြီးမားသောမျက်လုံးများဖြင့်နဂါး၏ပါးစပ်မှတဆင့်ဝင်သည် ရောင်စုံဝံ နေရာတိုင်းမှာ မယားစကား, သကြားလုံး မျိုးစုံနှင့်အများကြီးပို။ အဆိုပါကဖေးတွင်ကဏ္ different လေးခုရှိသည်။ Milk Stand သို့မဟုတ် Milk Stand သည်လှပသည်။ ယုန်နှင့်ကြက်တစ်ကောင်တည်းရှိသည့် Experiment Bar သည်စားသုံးသူများအား indigo jellyfish အတွင်းတွင်ကော့တေးများကိုသောက်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ နောက်ဆုံးတော့ Mel Tea Room ရှိတယ်။ macaroons ကော်လံတွေရှိတယ်။
ကော်ဖီဆိုင် ၀ န်ထမ်းများသည်သူတို့၏နာမည်နှင့် ၀ တ်စုံများနှင့်သိပ်မဝေးလှပါ။ အစားအစာလည်းမဟုတ်၊ အရောင်များ၊ ပုံစံများနှင့်အရသာများလည်းမရှိပါ။ ဤ site သည် Tokyo, Harajuku, YM Suquare 4F တွင်ဖြစ်သည်။
စိတ်ရှုပ်ထွေးသည့်အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးသည့် macaroons နှင့်ကော်ဖီတစ်ခွက်သို့မဟုတ်thanရာမနှင့် sexy စက်ရုပ်များနှင့်အတူကော်ဖီတစ်ခွက်သွားဝယ်ခြင်းထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်မှာ ကိုယ်ပွားစက်ရုံ။ ဒီ site သည်အရေးအကြီးဆုံးသောအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် manga / anime ရပ်ကွက်များဖြစ်သည်။ အဲဒီအကြောင်းကားအဘယ်သို့? ကောင်းပြီ, ဒီနေရာမှာသူတို့လုပ်နေကြသည် သင်၏ခေါင်း၏ 3D ဒီဂျစ်တယ်မော်ဒယ်များ အဲဒါမှန်ပါတယ်၊ တူညီပေမယ့်သေးသေးလေးပါ။ သင်နောက်မှခန္ဓာကိုယ်ထည့်သွင်းရသောသေးငယ်တဲ့ ဦး ခေါင်း မတ်မတ် သင်ဘာလိုချင်လဲ။
ပတ်ပတ်လည်စျေးနှုန်းအဘို့သင့်ကိုယ်သင်တစ် ဦး အိတ်ဆောင်ဗားရှင်း 1.700 ဒေါ်လာ။ ဘယ်လိုလဲ? မလုံလောက်သော geek? ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနေရာကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကပြောခဲ့ပေမယ့်မကြာသေးခင်ကခရီးသွား many ည့်သည်တော်တော်များများကအဲဒီနေရာကိုရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ကံကောင်းပါစေ! နောက်ဆုံးတော့တိုကျိုဆိုတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမက္ကာကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ပါပဲ Meguro ကပ်ပါးဗေဒပြတိုက်။
Meguro သည်အခြားတိုကျိုရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်သေးငယ်သောပြတိုက်သည် hypochondria ရှိသူများနှင့်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည်သေးငယ်သော်လည်းအထပ်နှစ်ထပ်ရှိသည်။ အောက်ပိုင်းတွင်မြေပုံများနှင့်ကွဲပြားသောပုံများနှင့်အတော်လေးတိတ်ဆိတ်စွာရှိသည် တိရိစ္ဆာန်များကူးစက်ကြောင်းကပ်ပါး ဒါမှမဟုတ်လူတွေဖြစ်ပေမယ့်ဒုတိယထပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပါ ၀ င်ပတ်သက်လာလို့အခြေအနေတွေကပိုလေးတယ် လူသားများကူးစက်ကြောင်းကပ်ပါး။
ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစုဆောင်းမှုမှာကပ်ပါးကောင်ပေါင်း ၄၅၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အရာအားလုံးကအထင်ကြီးစရာပါ။ ငါတို့တကယ်အဲဒီမှာ bug ကိုရနိုင်မလား? စုဆောင်းမှုတွင်ကြယ်နှစ်လုံးပါရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်အပူပိုင်းကပ်ပါးကောင်နှင့်အတူပေ ၃၀ နီးပါးရှည်သောပိုးကောင်တစ်မျိုးပါ ၀ င်သော ၀ တ်ရည်ရှိပုံတစ်ပုံရှိသည်။ ပြီးတော့ငါတို့မသွားခင်သိချင်စိတ်နှင့်လှူဒါန်းသောလက်ဆောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့အဘယ်ကြောင့်သွားလည်ရမည်နည်း။
ဝင်ကြေးအခမဲ့ ဒါပေမယ့်သင်ခရီးစဉ်ကိုကြိုက်ရင်ပိုက်ဆံအနည်းငယ်ချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ ပြတိုက်သည် JR Meguro ဘူတာမှ ၁၅ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ 15-4-1 Shinmeguro ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးရောက်လာကြသည် အမေရိကန်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြို့ New Orleansဒီမှာပါ Voodoo ၏သမိုင်းဆိုင်ရာပြတိုက်။
ဒီနေရာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် စိတ်အားထက်သန်သောဒေသခံအနုပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သော Charles Massicot Gandolfo မှဖြစ်သည် voodoo, အာဖရိကကယူဆောင်ဘာသာတရားကို ကျေးကျွန်။ ၎င်းသည်အမေရိကနှင့်အာဖရိကအကြားရှိထူးဆန်းသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအပြန်အလှန်နားလည်မှုပေါင်းစပ်မှုအားတွေ့နိုင်သည့်ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူဝီဇီယားနားသည်ကျွန်သမိုင်းကြောင်းများစွာရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြတိုက်တွင်အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည်။ voodoo အရုပ်, taxidermy, talismans နှင့်အသိအကျွမ်းပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းများ ဒေသခံ voodoo ယဇ်ပုရောဟိတ်မာရီယာ Laveau အမည်ရှိ။
ပြတိုက်၏တူညီသောတံခါးမှသည် စိန့်လူးဝစ်သုသာန်၏ Gu ည့်လမ်းညွှန်များ, ဒီမှာလူသိများတဲ့ဒီအမျိုးသမီး၏သင်္ချိုင်းသည်အဘယ်မှာရှိ။ သိသာထင်ရှားတဲ့သင်ဟာမြွေအရေခွံကနေစာအုပ်တွေ၊ ဖယောင်းတိုင်တွေ၊ မှော်ဆေးဆီတွေအထိသင်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်မူရင်းအမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ ပြတိုက်သည် Dumaine လမ်း၊ ၇၂၄ တွင်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြား geek ခရီးစဉ်တွေအများကြီးရှိပေမယ့်အာရှကိုလည်ပတ်ဖို့၊ တရုတ်, ဖရဲသီးပြတိုက်။ ဟုတ်တယ်၊ ဘေဂျင်း၏တောင်ဘက်သည်ဤစပ်စုပြတိုက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အရပျကိုပြည့်စုံစေသည် ဖရဲသီးခရီး၊ အာဖရိကတောင်ပိုင်းမှ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်မှကမ္ဘာအနှံ့ခရီး အပြင်အာကာသ - သမိုင်း၊ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ၊ ကြီးထွားမှုနှင့်ဤအသီးကိုတရုတ်တို့နှစ်သက်သည်။
အဆိုပါအဆောက်အ ဦး အနာဂတ်ဗိသုကာနှင့်ဖြစ်ပါတယ် ဖယောင်းဖရဲသီးနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူမျိုးစုံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူတို့နှင့်အတူလိုက်ပါလာသောအလွန်အားကောင်းပြီးတောက်ပသောနီယွန်မီးထွန်းများနှင့်အတူခရီးသွားခြင်းနီးပါးနီးပါးဖြစ်စေသည်။ ပြတိုက်ပြင်ပရှိဖရဲသီးများအမှန်ရှိသည်ဟုဆိုရမည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်လိုနိမိတ်လက္ခဏာမရှိဘူး။ အရှက်
သင်ဤမြေအောက်ရထားလိုင်း ၄ မှ TianGong သို့သွားပြီး Panggezhuangqiao သို့ဘတ်စ်ကားစီးပါ။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှသောကြာအထိမနက် ၉:၃၀ မှညနေ ၄:၃၀ အထိဖွင့်ပြီးဝင်ပေါက် ၂၀ ယွမ်ကုန်ကျသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » Geek ခရီးသွား
ကွန်ဂိုက de Mont-rebei